15ka ugu sarreeya Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee La Aqoonsaday 2022
Dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah looga wada hadlay boostada waxaa loogu talagalay dadka waaweyn iyo dhalinyarada doonaya inay dhammaystiraan dibloomada dugsiga sare ee khadka tooska ah.
Dadku waxay uga baxaan dugsiga sare sababo ay ka mid noqon karaan arrimo dhaqaale, marka loo eego sare u kaca khidmadaha waxbarashadda ee waxbarashada, gaar ahaan Mareykanka, ardayda waxay uga baxaan inay shaqo bilaabaan oo ay daboolaan baahidooda. Waxa kale oo ay noqon kartaa sababtoo ah iyagu ma xiiseeyaan dugsiga xilligaas, arrimaha caafimaadka, ama waxay ku adag tahay inay raacaan jadwalka dugsiga caadiga ah.
Waxaa jira sababo badan oo sababta ay dadku uga haraan dugsiga sare mana jirin baahi loo qabo in laga wada hadlo arimahan, taa badalkeed, waxaan soo bandhigayaa xalka. Waxba ma ahan wixii dhici kara ee aan kaa dhigin inaad horay u hesho diblooma dugsi sare, boostadan blog-ka ah waxay soo bandhigeysaa xal.
Halkan, waxaan ku taxay oo aan kala hadlay dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah ee ay aqoonsan yihiin hay'adaha waxbarashada ee saxda ah ee dadka da 'kasta leh si ay u qoraan. Waxaan sii aaday inaan kala hadlo diplomaasiyada dugsiga sare ee bilaashka ah qadka tooska ah ee bilaashka ah, dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee dadka qaangaarka ah ee Texas, iyo Su'aalaha Su'aalaha Dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah.
Si ka duwan wixii aad u baran jirtay, fasalada dibloomada dugsiga sare waxaa lagu bixiyaa khadka tooska ah, iyadoo la tixgelinayo kobaca waxbarashada khadka tooska ah, waa doorashada dabiiciga ah ee dhalinyarada maanta maadaama ay ku koreen adduunyo ay tignoolajiyad wadato. Sidaa darteed, way kafiican tahay inaad ku raacdo diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah, waa ka dhib yar tahay, waxaad wax ku baran kartaa waqtigaaga (is-socod) iyo sahlanaasho, waxayna sidoo kale ku siinaysaa inaad hesho macluumaad badan.
Haddii aadan ka helin hab dhaqameedka wax-u-dhigashada ee xiisaha leh sababtaas darteed ayaa looga baxay dugsiga sare, diblooma diblooma dugsiga sare ee bilaashka ah ayaa adiga kuu ah adiga. Qalabka loo baahan yahay in laga qayb qaato waxbarashada qadka tooska ah waxaa ka mid ah PC ama kiniin, xiriir Wi-Fi oo xasilan, iyo go'aan qaadashadaada. Waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee ku saabsan waxbarashada khadka tooska ah waa dabacsanaanta, taasi waa, waxaad ku baran kartaa dibloomaada dugsiga sare adigoon wax xayiraad ah saarin masuuliyadahaaga.
Marka, haddii aad shaqeynaysay oo aad rabto inaad iska diiwaangeliso shahaadada dugsiga sare ee bilaashka ah khadka tooska ah, uma baahnid inaad shaqada joojiso, weli waad shaqeysaa adigoo dhammaystiraya barnaamijkaaga dibloomada dugsiga sare ee khadka tooska ah.
1 Su'aalaha ku saabsan Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah
1.1 Dibloomada dugsiga sare ee internetka ma sharci baa?
1.2 Sideen ku heli karaa dibloomahayga dugsiga sare khadka tooska ah ee bilaashka ah?
1.3 Ma heli kartaa dibloomaada dugsiga sare ka dib da'da 21?
1.4 Waa maxay da'da ugu da'da weyn ee aad dhigan karto dugsiga sare?
2 10 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah
2.1 1. Dugsiga Sare ee Penn Foster
2.2 2. Dugsiga Sare ee Franklin Virtual (FVHS)
2.4 4. Akadamiyadda Farsamada ee Arkansas (ARVA)
2.5 5. Akadamiyada Iskuxirka
2.6 6. Akadeemiyada Guusha ee Texas
2.7 7. Dugsiga Sare ee Mizzou Academy Online
2.8 8. Dugsiga Dhexe ee Middleton
2.9 9. Dugsiga Sare ee Liberty
2.10 10. Dugsiga Sare ee Orion
3 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qaangaarka
3.1 1. Dugsiga Keystone
3.2 2. Dugsiga Sare ee Excel
3.3 3. Dugsiga Sare ee Dadka Waaweyn ee Dadweynaha ee Park City Independent
3.4 4. Smart Horizon Career Online High School Online (COHS)
3.5 5. James Madison Dugsiga Sare ee Onlineka
4 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Dadka Waaweyn ee Texas
Su'aalaha ku saabsan Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah
Dibloomada dugsiga sare ee internetka ma sharci baa?
Dibloomada dugsiga sare ee laga helo khadka tooska ah ee hay'ad la aqoonsan yahay waa mid sharci ah oo sax ah sida mid laga helay iskuul dhaqameed waxaana aqbalaya kulliyadaha iyo jaamacadaha.
Sideen ku heli karaa dibloomahayga dugsiga sare khadka tooska ah ee bilaashka ah?
Sidee iyo halka aad ka heli karto dibloomaada dugsiga sare ee bilaashka ah khadka tooska ah ayaa looga hadlay qodobkan, sii wad akhriska si aad u ogaato-sida.
Ma heli kartaa dibloomaada dugsiga sare ka dib da'da 21?
Markaad gaarto da'da 21 iyo wixii ka sareeya waa inaad dhigataa dugsi sare oo qaangaar ah si aad u hesho dibloomadaada ama waad diyaarin kartaa oo aad qaadan kartaa imtixaanka GED.
Waa maxay da'da ugu da'da weyn ee aad dhigan karto dugsiga sare?
Da'da ugu da'da weyn ee lagu dhigto dugsiga sare way ku kala duwan tahay adduunka oo dhan laakiin badanaa waa qiyaastii 20 illaa 26 sano, taas oo ku xidhan waddanka ama gobolka.
10 Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah
15-ka diblooma ee dugsiga sare ee bilaashka ah khadka tooska ah waxay kugu qaadan doontaa safar bilaash ah si ay kaaga caawiso inaad ku kasbato diblooma lacag yar ama aan lahayn qarash aad kubixiso. Nidaamyadan meeraha ah waxaa loogu talagalay inay ku siiyaan waxbarasho tayo leh iyadoon dhaqaale badan la saarin.
Penn Foster School High School
Dugsiga Sare ee Franklin Virtual (FVHS)
Akadamiyadda Farsamada Arkansas (ARVA)
Dugsiga Sare ee Mizzou Academy Online
1. Dugsiga Sare ee Penn Foster
Waxaa la aasaasay 1890 waxayna ku taalaa Scranton, Pennsylvania, Mareykanka, Penn Foster waa mid gaar loo leeyahay, oo loogu talagalay kuleejka internetka ee bixiya dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah. Waxay labadaba gobol ahaan iyo qaran ahaanba u aqoonsan tahay barnaamijyadeeda barashada internetka ee DEAC, macalimiinteeda dadaalka iyo taageerada leh ayaa loogu talagalay inay ku siiso waxbarasho adag iyo khibrad ardayga khadka tooska ah ee tooska ah.
Manhajka dibloomada dugsiga sare ee 'Penn Foster' ee dugsiga sare ee internetka wuxuu ka kooban yahay 16.5 buundooyin asaasi ah waxaadna doorataa 5 dhibcood oo la doorto, oo ka bilaabma xulashooyinka tacliinta, sida suugaanta Mareykanka iyo Algebra, illaa barnaamijyada tababarka xirfadaha sida korantada, tuubbada, nijaarrada, kaaliyaha caafimaadka xoolaha, iyo daryeelka hore. kulleejo.
Barnaamijka dugsiga sare ee khadka tooska ah wuxuu leeyahay wadarta culeys dhan 21.5 oo dhibco ah kharashkiisuna waa $ 1,315 oo aad kubixin karto bil walba qeyb ahaan wax kayar $ 49 bishii. Waxaa jira dalabyo qiimo dhimis ah sidoo kale, $ 96 qiimo dhimis ah otomaatiga iyo $ 366 qiimo dhimis ah oo loogu talagalay lacag bixinta buuxda markii la qoro. Wareejinta amaahda ee 16 waxaa sidoo kale lagu aqbalaa $ 45 qiimo dhimis ah oo ku saabsan waxbarashaddii halkii deyn la aqbalo.
Wada-hawlgalayaasha dugsiga sare ee Penn Foster ee leh Dugsiyada Xirfadaha, Jaamacadaha, iyo Job Corps dhammaan waddanka oo dhan, oo aad ka hesho mid ka mid ah la-hawlgalayaasheeda ayaa kaa aqbalaya, kharashyada waxbarashada ee barnaamijka dibloomada dugsiga sare waa la dabooli karaa.
2. Dugsiga Sare ee Franklin Virtual (FVHS)
FVHS waxaa la aasaasay 2010 iyadoo ah dugsi sare oo khaas ah oo internetka ah oo ku yaal Tallahassee, Florida, waxayna bixisaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah oo loogu talagalay dhalinyarada iyo dadka waaweynba. Dugsiga sare ee kama-dambaysta ah ayaa la aqoonsan yahay AdvancED wuxuuna ka diiwaangashan yahay Guddiga Waxbarashada ee Florida.
Manhajka dugsiga sare wuxuu la mid yahay mid dhaqameed laakiin wuxuu la yimaadaa astaamo lagu daro dabacsanaanta iyo dhammaan faa'iidooyinka barashada internetka oo ay ku jiraan barashada gurigaaga, is-socodsiinta, ardayduna waxay u habeyn karaan oo ay u habeyn karaan manhajka si ay ugu habboonaadaan waxbarashadooda yoolalka.
Dugsiga Farsamada ee Franklin, ardayda waxaa la siiyaa ikhtiyaarro waxbarasho oo tayo leh, dabacsan, kharashna ku ool ah si looga caawiyo inay gaaraan himilooyinkooda shaqsiyeed, waxbarasho, iyo xirfadeed. Kharashka waxbarashada bil kasta waa $ 330.
Iskuulada Pinnacle Charter waxay bixiyaan waxbarasho bilaash ah oo loogu talagalay ardayda si ay u helaan saxda saxda ah ee baahidooda waxbarasho iyo halkan, waxaad iska qori kartaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah. Isqoristu waxay u furantahay dhamaan ardayda laga bilaabo fasalada 6 ilaa 12, maalin kasta sanad dugsiyeedka oo dhan. Iskuulka waxaa lagu aqoonsan yahay AdvancED.
Isqorista Dibloomada dugsiga sare ee Pinnacle ee khadka tooska ah, waxaa lagu siin doonaa khibrad waxbarasho oo tayo sare leh, manhaj aad ufiican, iyo macalimiin aqoon sare leh ardayda iyo qoysaska raadinaya khibrad ka dabacsan tan dugsiga caadiga ah.
4. Akadamiyadda Farsamada ee Arkansas (ARVA)
Akadamiyadda Farsamada ee Arkansas waa iskuul toos ah oo toos ah oo toos ah oo loogu talagalay ardayda K-12 ee loogu talagalay dhiirigelinta iyo xoojinta ardayda iyada oo loo marayo khibrad waxbarasho oo loogu talagalay baahida arday kasta. Markaad joogto ARVA waxaad go'aansan kartaa inaad ku booddo waxbarashadaada adoo qaadanaya labada darajo ee amaahda oo aad kasban karto dhibcaha kulliyadda.
Akadeemiyada dalwaddu waxay kaloo leedahay ikhtiyaar u diyaargarowga Xirfadaha Stride ee ardayda siiya fursad ay ku sahamiyaan ikhtiyaarrada xirfadaha isla markaana mustaqbal ku yeeshaan mustaqbal iyagoo qaadanaya koorsooyin tacliimeed oo asaasi ah iyo sidoo kale xulashooyin diiradda saaraya xirfadda dalabka sare ee xulashadooda. Waxay sidoo kale bixiyaan koorsooyin xagaaga oo bilaash ah iyo xeryo.
5. Akadamiyada Iskuxirka
Aqoonsiga 'Cognia' oo ay qaabeeyeen khubaro aqoon durugsan u leh, Isku xidhka 'Connections Academy' waa iskuul dadweyne oo khadka tooska ah wax looga dhigto oo bilaash ah oo internetka ah oo aad ka heli karto diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah. Manhajku wuxuu ardayda u akhriyaa inay nolosha ka sii fogaadaan iyaga oo siinaya dhiirigelinta iyo taageerada ay u baahan yihiin si ay u helaan aqoon aasaasi ah una horumariyaan xirfadaha nolosha ee muhiimka ah.
Iskuxirka Akadeemiyada waa mid kamid ah dibloomaada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah leh 100% lacag la'aan ah laakiin waa inaad bixisaa alaabada caadiga ah ee iskuulka iyo safarada iskaa wax u qabso ah.
6. Akadeemiyada Guusha ee Texas
Kani waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah laga helo ee ku yaal Arlington, Texas, Mareykanka, waxaa lagu aqoonsan yahay AdvancedcED, Wakaaladda Waxbarashada Texas, iyo hay'adaha kale ee aqoonsiga. Waxaa jira ikhtiyaarro waxbarasho oo qaan-gaar ah iyo dhallinyarro ah waxaadna u baahan tahay inaad sahamiso faa'iidooyinka buuxa ee barashada internetka oo ay ku jiraan, qaadashada fasalo waqtiga adiga kugu habboon, diiqad yar iyo walaac, iyo jadwal dabacsan oo kuwa kale ah.
Ardaydu waxay bixin karaan koorsooyin Maareynta Macluumaadka Ganacsiga, Maareynta Ganacsiga, Hordhac ku saabsan Xisaabaadka, Teknolojiyada korantada, iyo Tuubooyinka. Sidoo kale, ardayda leh 0-11.5 dhibco waxay bixiyaan $ 1,005 muddo 8 bilood ah halka ardayda ka badan 11.5 dhibcood ay bixiyaan $ 905 ama $ 105 bishiiba 9 bilood.
7. Dugsiga Sare ee Mizzou Academy Online
Akadamiyadda Mizzou waa iskuul qaran oo laga aqoonsan yahay khadka tooska ah / isku dhafka ah ee Jaamacadda Missouri, oo fadhigeedu yahay Columbia, Missouri, US, waxayna bixisaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah oo khadka tooska ah ah, waa la aqoonsan yahay AdvancED. Iskuulku wuxuu bixiyaa koorsooyin sida Ingiriisiga / Farshaxanka Luuqada, Xisaabta, Sayniska, Cilmiga Bulshada, Farshaxanka Fiican, Farshaxanka Dhaqanka, Caafimaadka Jirka, Caafimaadka, Luqadaha Aduunka, iyo Xulashada.
Waxaa jira in kabadan 200 koorsooyin, iskaashiyo cusub oo iskaashi wadaag ah, iyo ikhtiyaarro, oo loogu talagalay aasaasiga illaa ardayda dugsiga sare, Mizzou Academy waxay siisaa xal aad ufiican si loo daboolo baahiyaha kaladuwan ee ardayda, dugsiyada, iyo degmooyinka
Kharashka waxbarashadu waa $ 500 halkii koorso laakiin dadka degan Missouri ee loo ogolaado barnaamijka diblooma ee khadka tooska ah waxay u qalmi karaan qiimo dhimis 50% ah.
8. Dugsiga Dhexe ee Middleton
Middleton Academy, waxaad iska qori kartaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah waxaadna kasban kartaa xirfado iyo aqoon kala duwan oo kaa caawin doonta inaad sugto mustaqbal mustaqbal. Akadeemiyadu waxay ku saleysan tahay Woodbridge, VA, oo ay aqoonsan tahay Advanced iyo DEAC, waxay u adeegtaa illaha ardayda ee macallimiinta ay hogaaminayaan, koorsooyinka ku saleysan ardayda ee buuxiya Heerarka Waxqabadka Gobolka.
Dugsiga Dhexe wuxuu iskaashi la leeyahay dhowr iskuulo gaar loo leeyahay iyo kuwa diinta, iskuulo dawladeed, iyo barnaamijyo milatari. Haddii aad dooneysid inaad qaadatid fasalo yar oo khadka tooska ah ah ama aad kasbato diblooma dugsiga sare khadka tooska ah, akadeemiyadda ayaa adiga kugu habboon
9. Dugsiga Sare ee Liberty
Kani waa mid ka mid ah dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee khadka tooska ah, wuxuu ku yaal Battleboro, Vermont, United State, waana ikhtiyaar aad u weyn oo loogu talagalay shaqsiyaadka aan awoodin inay dhammaystiraan dugsiga sare noloshooda iyo sidoo kale ardayda hadda jirta ee ku daalay barashada dhaqanka. oo aad rabto inaad sahamiso xulashooyinka waxbarasho ee rogrogmi kara.
Waad iska qori kartaa koorsooyinka sida Ingiriisiga, Xisaabta, Cilmiga Bulshada, Sayniska, iyo koorsooyinka sahaminta oo mid kasta oo ka mid ah barnaamijyadan ayaa kaa doonaya inaad sameyso lacag bixin $ 300 ah.
Dugsiga Sare ee Orion wuxuu ku yaal Midland, Texas, Mareykanka, wuxuuna ku bixiyaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee xiiseynaya kaqeyb qaadashada qaabka waxbarasho ee casriga ah - barashada khadka tooska ah. Dugsiga waxaa aqoonsan ACTS iyo Cognia, waxay bixiyaan in kabadan 200 koorsooyin oo ku fidsan manhaj adag, laga bilaabo koorsooyinka waxbarasho ee madaxbannaan ilaa AP iyo xulashooyinka laba-amaah ah.
Barteyaasha waxaa la siiyaa waxbarasho tayo sare leh iyo qaab dabacsan oo ay ku bartaan jawi qani ah, taageero leh oo khadka tooska ah ah, iyo u oggolaanshaha bartayaasha inay u fududeeyaan waxbarashadooda firfircoon.
Iskuuladan dhammaantood waa la aqoonsan yahay urur sax ah welwelka helitaanka diblooma sax ahna waa inuusan ku dhibin.
Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee khadka tooska ah ee bilaashka ah ee qaangaarka
Ma waxaad tahay qof weyn oo aan dhammeyn dugsiga sare oo aad rabto inaad hadda sameyso? Hagaag, halkan waa warka wanaagsan. Waxaad gabi ahaanba kasban kartaa dibloomada dugsiga sare ee la aqoonsan yahay, iyo markan, khadka tooska ah oo bilaash ah. Qaybta waxbarashadu way soo fiicnaatay sannadihii la soo dhaafay iyada oo ay ugu wacan tahay kaligiis ikhtiraaca internetka, haddana dugsiyo badan ayaa hirgeliyay habka barashada internetka.
Horumarka tikniyoolajiyadda ee waxbarashadu wuxuu ka dhigay mid xiise badan, madadaalo leh, firfircoon, oo xiiso badan marka la barbar dhigo habka barista iyo barashada dhaqanka. Marka, haddii mar uun lagugu jiiday caqabado kuu oggolaan waayey inaad dhammaysato dugsiga sare goor hore, halkan waa fursadda lagu dhammaystiri karo, oo markan, waxaad ku dhammaystireysaa qaab.
Habka barashada tooska ah waa mid jilicsan, dhaqso u dhameystiran, oo ka jaban, taasi waa qaabab badan, miyaanay ahayn?
Isku soo uruurinta hoose waa dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo bilaash ah oo aan dadka waaweyn wax kharash ah ugu fadhiyin.
Dugsiga Sare ee Dadka Waaweyn ee Dadweynaha ee Park City Independent
Dugsiga Sare ee Online-ka ah ee 'Smart Horizon Career Career' (COHS)
James Madison Dugsiga Sare Online
Iskuulka Virtual Clintondale
1. Dugsiga Keystone
Dugsiga Keystone wuxuu ku bixiyaa diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah ee bilaashka ah ee dadka waaweyn, barnaamijka waxaa loogu talagalay inuu noqdo mid jajaban oo ardayda ka caawiya inay gaaraan himilooyinkooda gaarka ah iyo yoolalka. Waxaad sidoo kale baran kartaa xirfado cusub si aad u abuurto waddo xirfadeed cusub ama aad xirfad sare ugu sii qaadatid heerka xiga. Koorso ayaa la dhammaystiri karaa inta u dhexeysa 8 iyo 12 toddobaad waxaana la gaaraa illaa 5-6 dhibco sanadkiiba.
2. Dugsiga Sare ee Excel
Dugsiga Sare ee Excel wuxuu ku bixiyaa diblooma dugsi sare oo la aqoonsan yahay khadka tooska ah iyada oo aan wax kharash ah looga fadhiyin dadka waaweyn, waxaad buundooyinka ka soo wareejin kartaa dugsigii hore ee aad ka jirtay oo aad dhammaystiri kartaa wixii aad billowday, oo aad ku dhammaysan kartaa dhawr bilood oo keliya Barnaamijyada diblooma ee dugsiga sare ee internetka waa 100% is-socod oo waxaad ku dhammaystiri kartaa xawaarahaaga.
3. Dugsiga Sare ee Dadka Waaweyn ee Dadweynaha ee Park City Independent
Waxaa aqoonsaday AdvancEd oo ku yaalo Scottsdale, Arizona, US, Park City Independent Online Adult High School wuxuu u furan yahay muwaadiniinta Mareykanka iyo sidoo kale ardayda adduunka oo idil. Isdiiwaangelinta halkan waxay kuu fureysaa fursado badan oo aad ku cusbooneysiin karto xirfaddaada iyo aqoontaada adoo ku dhex baranaya kambaska dalwaddii laga helo raaxada gurigaaga iyo xawaarahaaga, waqtigaaga, iyo jadwalkaaga.
4. Smart Horizon Career Online High School Online (COHS)
Dugsigan sare ee khadka tooska ah wuxuu kuxiran yahay Smart Horizons Career Online Education wuxuuna u heellan yahay u adeegida malaayiinta dadka waaweyn iyo dhalinyarada waaweyn ee aan haysan dibloomada dugsiga sare. Dhammaan barnaamijyadu waa 100% khadka tooska ah iyo qaabka manaahijtu waxay u horumariyaan arday kasta iyadoo lagu saleynayo waxqabadka.
5. James Madison Dugsiga Sare ee Onlineka
James Madison High School Online waxaad iska qori kartaa dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah khadka tooska ah ee bilaashka ah ee dadka waaweyn, iyada oo ay aqoonsan tahay DEAC, CHEA, iyo AdvancED. Waad iska qori kartaa barnaamijyadeeda dibloomaasiga ah ee 24 wakhti kasta oo sanadka ka mid ah. Dibloomada waxaa loogu talagalay inay kuu diyaariso kuleejka, u-qalanto shaqo fiican, ama inaad dhammaystirto dugsigaaga sare.
Dugsiga Cilmiga ah ee loo yaqaan 'Clintondale Virtual School' waxaad iska qori kartaa dibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah oo bilaash ah iyada oo aan wax lacag ah looga qaadaynin dadka waaweyn taas oo lagu dhammayn karo 8 toddobaad gudahood, waa la aqoonsan yahay AdvancEd. Barnaamijyada lagu bixiyo halkan waxaa loogu talagalay oo keliya dadka waaweyn ee da'doodu tahay 22 iyo wixii ka sarreeya, isqorista waxaa la sameeyaa wakhti kasta oo sanadka ah si looga faa'iideysto fasalladooda lagu bixiyo khadka tooska ah ee 24/7.
Dibloomada Dugsiga Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Dadka Waaweyn ee Texas
Haddii aad qaangaar ku tahay Texas oo aad rabto inaad ku dhammaystirto dibloomaada dugsiga sare khadka tooska ah, adigoo ku habboon gurigaaga, iyo xawaarahaaga waa inaad tixraacdaa dugsiyada hoose.
Iskuulka Keystone ee khadka tooska ah
Kuleejka San Antonio
Darajooyinka Ardayda Dugsiga Sare ee neceb Xisaabta iyo Sayniska
10 Barnaamijyada Xagaaga ee Bilaashka ah ee Ardayda Dugsiga Sare
wax ku barta internetka Koorsooyinka Free Online Dugsiyada Waxbarshada Bilaashka ah Baro Xirfad Online koorsooyinka interneedka
diblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ahdibloomada dugsiga sare ee bilaashka ah ee la aqoonsan yahaydiblooma dugsiga sare oo bilaash ah oo loogu talagalay dadka waaweyn ee texasdiblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah ee bilaashka ah ee dadka waaweyndiblooma dugsiga sare oo bilaash ah khadka tooska ah ee bilaashka ah ee dadka waaweyn ee texas
Previous Post:13 Sababaha Gaarka ah ee ay waxbarashadu muhiim u tahay
Post Next:12 Shahaadada Maareynta Maareynta Sare ee Khadka Tooska ah